ဒီအခြိနျ အကွောငျးပွခကျြကောငျးကောငျးသာရှိရငျ ပွိုလဲသှားမှာသခြောပါတယျ – Shinyoon
ဒီအခြိနျ အကွောငျးပွခကျြကောငျးကောငျးသာရှိရငျ ပွိုလဲသှားမှာသခြောပါတယျ
May 29, 2021 by Shin Yoon
တဈစုံတဈရာမပြျောစဘေူးဆိုရငျတောငျ တခွားအရာတဈခုခုနဲ့ ဖွသေိမျ့လို့ရနသေေးရငျ အဆငျပွပေါတယျ အရာရာကိုက အဆငျမပွတေော့တဲ့အခါ မာနျတငျးထားတဲ့ကွားက ခွထေောကျတှကေ ယိုငျယိုငျသှားသေးတယျလေ … ဒီအခြိနျမှာသာ အကွောငျးပွခကျြ ကောငျးကောငျးလေးသာ ရှိနခေဲ့ရငျ တကယျကို ပွိုလဲသှားမှာပါ
ပြော့ညံ့လိုကျတာဆိုတဲ့ ခေါငျးစဉျ အရငျဆုံးမတပျပါနဲ့ … အထီးကနျြရခွငျးတှမှော ဘယျလောကျပဲ အသားကပြါတယျပွောပွော ကိုယျခဈြတဲ့သူဆီက ရတဲ့ ဥပက်ေခာတှေ ကွားမှာတော့ ဘယျသူမှ အသားကအြောငျ မနနေိုငျသေးပါဘူး … ဘာကွောငျ့လဲဆိုတဲ့ မေးခှနျးတှရေယျ ငါ့ကမြှ ဆိုတဲ့ အပွဈတငျသံတှကွေားမှာ ဆှဲထားရမယျ့လကျတှကေလဲ ရှားတယျ …
မကျနတေဲ့ အိပျမကျတှေ ပကျြပွယျသှားတဲ့အခါ ဆကျပွီးမကျပါဆိုပွီး အားပေးမယျ့လူကလဲ ကိုယျ့ကို ပိုပွီး ထိုးနှကျလာတဲ့အခါ မကျလကျစအိပျမကျတှတေောငျ ဆကျပွီး မကျရမှာကို ကွောကျလာတတျတယျလေ အရငျက အတူတူဆိုပွီး မြှျောလငျ့ခဲ့တဲ့လမျးထကျမှာ တဈယောကျတညျး ကနျြခဲ့ခွငျးတှကေလဲ ပွိုလဲခငျြစရာပါပဲလေ ….
မဖွဈသေးပါဘူးဆိုတဲ့ အတှေးနဲ့သာ အနောကျဘဝတှကေို ကွညျ့ရငျး ဆကျပွီး ရပျနတောပါ အပွုံးတှမှော အသကျမပါတော့ဘူး လမျးတှေ လြှောကျနပေမေယျ့လဲ ပနျးတိုငျတှဟော မရရော မသခြောတော့ဘူး ဘာကို မြှျောလငျ့ပွီး နရေမယျဆိုတာ မသိတော့တဲ့ အခိုကျအတနျ့တှလေေ …
တကယျကို သိပျပငျပနျးနပေါပွီ … ဒီအခြိနျ အကွောငျးပွခကျြကောငျးကောငျးလေး တဈခုသာရှိရငျ တကယျပဲ ပွိုလဲသှားမယျ့သူဟာ ကိုယျပါ ။
ဒီအချိန် အကြောင်းပြချက်ကောင်းကောင်းသာရှိရင် ပြိုလဲသွားမှာသေချာပါတယ်
တစ်စုံတစ်ရာမပျော်စေဘူးဆိုရင်တောင် တခြားအရာတစ်ခုခုနဲ့ ဖြေသိမ့်လို့ရနေသေးရင် အဆင်ပြေပါတယ် အရာရာကိုက အဆင်မပြေတော့တဲ့အခါ မာန်တင်းထားတဲ့ကြားက ခြေထောက်တွေက ယိုင်ယိုင်သွားသေးတယ်လေ … ဒီအချိန်မှာသာ အကြောင်းပြချက် ကောင်းကောင်းလေးသာ ရှိနေခဲ့ရင် တကယ်ကို ပြိုလဲသွားမှာပါ
ပျော့ညံ့လိုက်တာဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ် အရင်ဆုံးမတပ်ပါနဲ့ … အထီးကျန်ရခြင်းတွေမှာ ဘယ်လောက်ပဲ အသားကျပါတယ်ပြောပြော ကိုယ်ချစ်တဲ့သူဆီက ရတဲ့ ဥပေက္ခာတွေ ကြားမှာတော့ ဘယ်သူမှ အသားကျအောင် မနေနိုင်သေးပါဘူး … ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေရယ် ငါ့ကျမှ ဆိုတဲ့ အပြစ်တင်သံတွေကြားမှာ ဆွဲထားရမယ့်လက်တွေကလဲ ရှားတယ် …
မက်နေတဲ့ အိပ်မက်တွေ ပျက်ပြယ်သွားတဲ့အခါ ဆက်ပြီးမက်ပါဆိုပြီး အားပေးမယ့်လူကလဲ ကိုယ့်ကို ပိုပြီး ထိုးနှက်လာတဲ့အခါ မက်လက်စအိပ်မက်တွေတောင် ဆက်ပြီး မက်ရမှာကို ကြောက်လာတတ်တယ်လေ အရင်က အတူတူဆိုပြီး မျှော်လင့်ခဲ့တဲ့လမ်းထက်မှာ တစ်ယောက်တည်း ကျန်ခဲ့ခြင်းတွေကလဲ ပြိုလဲချင်စရာပါပဲလေ ….
မဖြစ်သေးပါဘူးဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့သာ အနောက်ဘ၀တွေကို ကြည့်ရင်း ဆက်ပြီး ရပ်နေတာပါ အပြုံးတွေမှာ အသက်မပါတော့ဘူး လမ်းတွေ လျှောက်နေပေမယ့်လဲ ပန်းတိုင်တွေဟာ မရေရာ မသေချာတော့ဘူး ဘာကို မျှော်လင့်ပြီး နေရမယ်ဆိုတာ မသိတော့တဲ့ အခိုက်အတန့်တွေလေ …
တကယ်ကို သိပ်ပင်ပန်းနေပါပြီ … ဒီအချိန် အကြောင်းပြချက်ကောင်းကောင်းလေး တစ်ခုသာရှိရင် တကယ်ပဲ ပြိုလဲသွားမယ့်သူဟာ ကိုယ်ပါ ။